Abantu Abaze Nethemba Kugqatso Lweebhayisekile EFransi Ngo-2016
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBasque IsiBatak (SaseToba) IsiBhulu IsiCatalan IsiChichewa IsiChitonga (SaseMalawi) IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFinnish IsiFrentshi IsiGalician IsiGeorgia IsiGrike IsiHausa IsiHebhere IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJavanese IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMyanmar IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPhuthukezi(sasePortugal) IsiPolish IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTahiti IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiValencian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba
Abantu Abaze Nethemba Kugqatso Lweebhayisekile EFransi
Ugqatso lweebhayisekile lwe-103 olwaziwayo ehlabathini lonke belukho nge-2 ukuya kutsho nge-24 kaJulayi, 2016. Kunyaka ongaphambi kwalowo, bekukho abagrogrisi eFransi ibe abantu abayi-100 bebengamaxhoba. Emva koko, ngeholide kaJulayi 14, 2016, umgrogrisi watshayisa abantu abaninzi ngoxa babebukele iifireworks kwisixeko saseNice. Kwasweleka abantu abayi-86 ibe abaninzi bonzakala.
Phezu kwazo nje ezi zinto zimbi bezisenzeka, amaNgqina KaYehova ebezimisele ukubathuthuzela nokubanika ithemba abantu baseFransi. Ngoko, amaNgqina abeka iitroli kwiindawo ezahlukahlukeneyo. AmaNgqina angaphezu kwe-1 400 avolontiya ukwenza lo msebenzi ibe anika abantu abafuna iimpendulo zemibuzo ebalulekileyo iincwadi ezithetha ngeBhayibhile ezingaphezu kwe-2 000.
‘Nikho Kuyo Yonke Indawo!’
Abantu ebebebukele olu gqatso bebothuswe kukubona amaNgqina KaYehova kwiindawo ezininzi. Abaququzeleli bolu gqatso bebengayeki ukuncoma amaNgqina besithi: “Nikho kuyo yonke indawo kolu gqatso!” Ababukeli abaninzi bebesithi: “AmaNgqina KaYehova alapha nawo!” Emva kweentsuku ezimbalwa zolu gqatso, umqhubi webhasi akazange avume ukulithatha iphecana, esithi sele efumene amane.
Bemangaliseke kukusoloko bebona amaNgqina, abanye abantu bathatha iincwadi etrolini okokuqala. Kwenzeka loo nto kumntu osebenza kwisitishi semidlalo owabona amaNgqina kolu gqatso kwiminyaka engaphambili. Kulo nyaka ugqibe ekubeni aye etrolini ibe ukhethe incwadi ethi, Imfihlelo Yolonwabo Lwentsapho kuba ithetha ngomxholo awuthandayo. Emva kokuyifunda emotweni yakhe, waxelela abantu asebenza nabo ngeetroli baza nabo bayokuzithathela ezabo iincwadi ezinemixholo eyahlukahlukeneyo.
AmaNgqina Anika Abantu Ithemba Nesiqinisekiso
Abanye abantu ababetyelele bakhangela amaNgqina KaYehova baza bazityanda igila kuwo. Elinye ibhinqa lathi kuwo belingenathemba ibe belicinga nangokuzibulala ngokuziphosa phantsi kwetreyini. Kodwa emva kokuva oko kuthethwa yiBhayibhile ngendlela ekuza kubakho ngayo uxolo xa kulawula uBukumkani bukaThixo kwixesha elizayo, lathuthuzeleka laza lagqiba ekubeni lingabi sazibulala. Elinye ibhinqa lathi kumaNgqina: “Ningawuyeki lo msebenzi niwenzayo!”
Indoda ehamba ngeentonga ethi idla ngokungabathembi abantu engabaziyo, ivumele elinye ibhinqa ebelinxibe kakuhle ukuba liyincede emva kokuba ibone ukuba liNgqina LikaYehova. Ithe: Enkosi ngoncumo lwakho nangendlela onxibe ngayo. Undenze ndakuthemba.”
Unokuyifumana phi intuthuzelo xa usentlungwini okanye ugula, unengxaki emtshatweni, okanye emsebenzini?
Kuxelelwa Abantu Ngethemba EliseBhayibhileni EParis